WordPress: Ndabere ma weghachite na Server ọzọ | Martech Zone
Saturday, January 6, 2007 Douglas Karr
Mgbe mwakpo spam na-ekwu okwu megide saịtị m (ụda dị ka akụkọ sayensị, eh?) Izu a, a manyere m ịmalitegharị sava m oge ole na ole tupu mwakpo ọgụ ahụ. Echere m n'ezie na m mebiri nchekwa data ma ọ bụ faịlụ n'ime WordPress n'ihi na mgbe ihe omume ahụ gasịrị, saịtị ahụ agaghị adịru ihe karịrị awa ole na ole ma ọ bụ karịa na-agbadaghị.
Ejiri m ohere ahụ mee ka saịtị m gaa na akaụntụ ọhụrụ na akaụntụ reseller na Ka Ebeo
. Enwere m obi ụtọ na Jumpline kemgbe ọtụtụ afọ. Ana m akwado ihe gbasara weebụsaịtị 30 ma ọ fọkarịrị ka ndị ahịa na-akpọ m kpọọ m (belụsọ na ha chọrọ enyemaka). Ọrụ a dị ịrịba ama na ndị otu na-akwado ha dị egwu.
Teknụzụ ha na-akwado bụ n'ezie ụmụ okorobịa ndị chọpụtara na ọ bụ ụfọdụ spam-bots na-egbu saịtị m (Daalụ!). Ga na akaụntụ ọhụrụ ahụ tinye saịtị a na ụdị PHP / MySQL kachasị ọhụrụ ma nwee ezigbo Ajax Webmail ngwa.
Ihe m na-aghọtaghị bụ ụdị ihe mgbu dị egwu ọ bụ ịnwa ịme a ọcha nwụnye nke WordPress. Ọtụtụ n'ime plugins ndị dị ebe ahụ na-agbakwunye ubi na tebụl na nchekwa data WordPress gị. Ana m enyocha mgbe niile na plugins ka nchekwa data m bụrụ ọdachi. Imezu WordPress ma ọ bụ nchekwa data nchekwa ma weghachite ya na akaụntụ ọhụrụ nwere ike ọ bụ naanị ịmegharị ya. Ma ọ dịkarịa ala, ọ ga-atụba ụyọkọ nke ubi ndị ọzọ na tebụl n'ebe ahụ. Ọ ga-amasị m ịhụ ụdị nsụgharị WordPress ga-eme mgbanwe mgbanwe nchekwa data mgbe ị na-agbanwe ngwa mgbakwunye ka mkpofu ahụ ghara ịhapụ behine.
Ọbụna m lere anya na ụfọdụ plugins ndị ọzọ ga-ewepụta blọọgụ WordPress gị na XML maka ibubata ọzọ, mana ị tufuru ọtụtụ data. Awa iri na abụọ ka e mesịrị (ụra hiri m ụra) echekwara m na emechara m megharịa akaụntụ ahụ na data niile metụtara ya, agbanyeghị. Ọ bụ ntakịrị nro, mana nke a bụ ihe m mere:
Kwadoro saịtị mbụ na nchekwa data.
Wụnye WordPress site na ncha na akaụntụ ọhụrụ ahụ.
Wụnye ngwa mgbakwunye WordPress kachasị ọhụrụ site na ncha na akaụntụ ọhụrụ ahụ.
Tọọ nhọrọ ngwa mgbakwunye niile na ntọala saịtị.
Ndi edere tebụl nke ọ bụla tebụl sitere na ebe nchekwa data isi mmalite na ebe nchekwa data njedebe.
Ehichapụla mpaghara niile na nchekwa data nke na-adịghị na ọdụ data na-aga.
Mee ka tebụl niile dị na nchekwa data na-aga (na-ewepu onwe gị maka ule WP ọkọlọtọ.
Ndi mbupụ nke ọ bụla tebụl -enweghị dobe ma megharia. Nke a ga-edekọ ihe ndekọ ahụ na nchekwa data ọhụrụ ahụ na otu igodo ahụ ka otu n'ime mmekọrịta ahụ ghara imebi.
Detuo folda wp-ọdịnaya m bulite na akaụntụ nnabata na akaụntụ ebe njedebe. Ebe ọ bụ na m kpaliri ngalaba aha ahụ, a na-echekwa amaokwu niile.
M gbara ọsọ na blog ma nwalee ya! Ekwesịrị m ihichapụ ụfọdụ peeji nke permalinks, amaghị m ihe kpatara ya, mana ha mechara dị mma.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na WordPress wuru n'ime Mbubata maka nyiwe ịde blọgụ asọmpi, mana ọ nweghị mbubata iji mepụta WordPress na mbubata WordPress nke ga-eleghara mgbanwe mgbakwunye anya.
Nke ahụ mere nke ọma. May nwere ike chọpụta na m na-agba ọsọ ọhụụ isiokwu. Naanị m na-enwe ọtụtụ obere okwu gbasara isiokwu beta nke m na-agba. Emeela m ụfọdụ nhazi nke isiokwu a mana echere m na ọ fọrọ nke nta ka m nweta ya ebe m chọrọ.
Naanị ihe m mere na isiokwu bụ na odee emezighi otu nkpuru osisi nile n’isiokwu nke biri n’elu ala> ahụ> mkpado, yabụ ekwesịrị m iji aka m tinye edemede Google Analytics m niile. Enwere m ike ịmebe omenala ma dee ya, mana echere m na emesịrị m ga-enwe mgbagwoju anya ebe ọ bụ na onye edemede isiokwu jiri aha 'ụkwụ' mee ihe niile. Ọ bụ isiokwu mara mma nke ukwuu!
Echere m na m laghachi azụ ugbu a! Ugbu a, m ga-arụ ọrụ!
Jenụwarị 7, 2007 na 1:36 PM
Enwere m obi ụtọ ime nke a na saịtị nwa m! Enwere m http://www.billkarr.com kwadoro n'ime subdirectory nke saịtị m, mana ugbu a enwere m ya na ya.
Feb 4, 2007 na 2:13 PM
Ana m anwale mgbe niile ma weghachite ngwọta, post gị dọọrọ uche m.
Iji wuru na mbupụ na mbubata wuru na 2.1, bụ nrọ. Enwere m nsogbu na eserese gosipụtara.
Achọrọ m ihichapụ ma maliteghachi blog ule ahụ, mana oge a, m ga-edezi faịlụ XML iji gosipụta ọnọdụ ọhụrụ nke eserese ahụ.
Aug 29, 2007 na 8:51 PM
Mụ onwe m nwekwara ezigbo ahụmahụ nke iwughachi saịtị WordPress m site n’ala ala. Ihe niile gara nke ọma dịka m ji n'aka na ndabere ihe niile site n'ọtụtụ ụzọ.
Isi nsogbu m gbaba bụ na ngalaba ọrụ m furu efu n'ihi mbubata site na faịlụ XML. Na mgbakwunye, e weghachitere posts ole na ole. Ọ dị ka ọ bụ n'ihi nsogbu ụfọdụ na ojiji nke otu ruturu na paragraf. Maka ebumnuche ụfọdụ, faịlụ nchekwa echeghị nke ọma na ntinye okwu na WordPress chere na ọ bịarutela njedebe nke post.
Ọ dị mma, o were obere oge mana enwere m ike iwepu ozi a na faịlụ .SQL m kwadoro tupu ihichapụ nchekwa data.
Daalụ maka ịkọkọrịta ahụmịhe gị.